Okuhlangenwe nakho kokuphila kwamahhashi ase-Arabia & Izwe - I-Airbnb
Okuhlangenwe nakho kokuphila kwamahhashi ase-Arabia & Izwe
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Peter
I-LOFT SSA, Itholakala emiklomelweni yemiklomelo eminingi yokuwina amahhashi ase-Arabia. Iyunithi yezinkanyezi ezingu-5 esitezi sokuqala eduze nesakhiwo sethu samahhashi angaphakathi. Ilala izivakashi ezifika ku-4
Ifulethi lihlukile ngokuphelele futhi liyimfihlo
Letha ihhashi lakho uma ufisa, sihlinzeka ngezitebele zokuqasha. Hlangana namahhashi ethu amangalisayo ase-Arabia. Uma ufisa ukugibela khona-ke yiba namapulazi okugibela aseduze. Hamba ukudoba edamu elinesitokwe esiphelele, uhambo lokubuka izihlahla, noma ujabulele nje ukuba sezweni.
Singabantu abanobungane be-LTIQ +.
Yiba yingxenye yamahhashi ethu ase-Arabia futhi uhlangane namahhashi ethu amaningi anqobayo. Ubufakazi bokuzalwa uma unenhlanhla yokuba lapha ngezikhathi ezikhethekile. ngokusekelwe ehoreni elingu-1 kusuka e-Melbourne CBD nemizuzu engu-40 ukusuka e-Melbourne Airport. Ukuhlala ezweni okuvumela ukuthula, ukuzola, ukuthula nokuzola endaweni engcono kakhulu, kodwa engamakhilomitha angu-2 kuphela ukusuka edolobheni elikhulu lase-Kilmore. Itholakala e-Central North of Victoria ukuvumela uhambo lwezinsuku eziningi kangaka phakathi nesifunda sethu. Siwuhambo olufushane oluya e-Bendigo, e-Macedon Ranges, e-Yarra Valley, e-Shepperton, nezinye izindawo eziningi eziyingqayizivele ze-Victoria.
Kukhona umzila wamahhashi nesikole sokugibela esitholakala emaminithini angu-15 ukusuka epulazini lethu kulabo abafisa ukufaka lokho kokuzithokozisa ekuhlaleni kwakho.
Sisikisela ukuthi wenze ukubhukha kusenesikhathi kulo msebenzi othandwayo wokuphumula. Xhumana nomzila othi "Uncle Nevs" & ukugibela isikole 5783 1310
AMAQEMBU AMAKHULU, SIPHINDE sibe ne-Airbnb "IKAMELO elisenkabeni" Ilala abantu abangu-2 & Indlu "ENGASEMANZINI" engu-4br elala abantu abangaba ngu-10... konke kutholakala epulazini...
I-HDTV engu-65" ene- I-Roku, I-Netflix, Apple TV, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
I-Kilmore iyisibonelo esiphelele sokuhlala ezweni. ihora elilodwa kuphela ukusuka e-Melbourne CBD nemizuzu engu-40 ukusuka e-Tullamarine Airport , kodwa ngokushesha nje lapho ufika uzozwa umoya ohlanzekile, umuzwa wokuthula nendawo lapho ungenza khona nje okuncane noma okuningi njengokufisayo.
U-Belinda no-Peter bahlezi betholakala ukwethula izivakashi zethu kumahhashi ethu ase-Arabia, banelise ntambama nathi, bahambe nawe ezindaweni. ukudoba edamu lethu elijulile elingu-1 kuvunyelwe futhi wamukelekile ukupheka ukubamba kwakho. Sicela ulethe isibambo sakho, futhi kukhona isitolo sendawo se-Bait ne-Fishing imizuzu embalwa nje kude. Njalo ujabule ukuphendula noma yimiphi imibuzo futhi wabelane ngolwazi & okuhlangenwe nakho kwethu kwamahhashi ase-Arabia.
U-Belinda no-Peter bahlezi betholakala ukwethula izivakashi zethu kumahhashi ethu ase-Arabia, banelise ntambama nathi, bahambe nawe ezindaweni. ukudoba edamu lethu elijulile elingu…